Shangri-La | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Shangri-La | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Haddii aad jeclaan duni iyo sheekooyinka markaasaad garan waxay qaadan safar galay caalami ah oo kala duwan, adduunka ka mid ah, malaha saafi ah. Kaasi waa soo jiidashada of this sii waxa aad ku guuleysato, naadi top ciyaarta. Shangri-La waxaa la ciyaaray shan duntu iyo shan iyo toban paylines in bixiso bidix ka xaq u. Ciyaarta ayaa waxaa lagu wadaa in hortegi lahaa dalalka awaalka buuraha Hamalayan weyn hoos. macbudka A weyn iyo webi oo xawaal dal waxaa hareerahaaga fiiri heer sare ah. The music qadiimiga ah macbudka Asian ee asalka bixisaa saamayn bogsiinta fikirka ah. Si aad meel u siiyo in aad, waxaad dooran kartaa ka 20p in max ka mid ah £ 200 wareejin kasta.
About sameeysa ee Shangri-La
Tani fantastic iyo midabo sii waxa aad ku guuleysato, naadi top kulanka waxaa la soo saaray by Next Gen. Mid ka mid ah soo saarayaasha keenta kulan casino online dunida ee. Waxay leeyihiin abaalmarino badan oo guusha Afyare in ay ka caawiyeen dadka joogo marti qaaday iyo ku guuleysan xamuulka ah abaal.
Calaamooyinka this sii waxa aad ku guuleysato, naadi top kulanka waa Shabeel cad, hooska badan, wiyisha, maroodiga, seef iyo macbudka ah. Shabeel cad waxa uu calaamad u top bixinta la 500 jeer aad saamiga markii shan ka mid ah noociisa muuqataa. Heart, kooxda, galnoba iyo dheemman kaararka yihiin ugu yaraan bixinta calaamadaha. Waxay u egyihiin sida dhagaxyo qaali ah, iyo ka dhigi duntu fiiriyaa soo jiidasho leh. Waxaa jira toddoba calaamadaha bonus ee ciyaarta this, saddex kulan ugu weyn iyo afar heerka gunnada. Waxay yihiin gabadha in jir sawir, kale ee jir dabka shiday iyo wheel Salaadda oo dahab ah. Waxaa afar calaamadaha qaab gadood leh astaamo kala duwan iyaga on, oo waxay u muuqdaan oo kaliya inta lagu guda jiro heerka bonus.
Bonus Wild: Gabadha in qaab dhismeedka sawirka dibadeed iyo ku Baddasha oo dhan marka laga reebo calaamad wheel Salaadda. Waxay u muuqataa kaliya on ambadeen afar, saddex iyo laba. Intaa waxaa dheer, Gabar ee dabka shiday jir u muuqataa sida duurjoogta ah mid aad u. Tani waxay kor u gaynta aad ku guuleysatay iyo kaa caawinaysaa in aad ku guuleysato tiirarka wanaagsan.
Bonus kala firdhiso: wheel salaadda dahab ah waa muujinta ku kala firdhi of this ee sii waxa aad ku guuleysato, naadi top ciyaarta. Saddex ama ka badan degtey calaamad this dhaliya heerka gunnada. Waxaa jira afar muuqaalada iyo aad kala sooc lahayn abaal mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxaad ku guuleysan karaa 8 ama 12 dhigeeysa la caga duurjoogta ah loogu balan qaadayo ama muuqaalada halkaas oo aad ku guuleysan karto saamiga ah 15x in 100x on your bet.
Summary: Iyada oo lacagihii kala duwan iyo sawiro cajiib ah, this sii waxa aad ku guuleysato, naadi top kulanka waa ugu fiican ee qaybta. Iyada oo dhigeeysa nasiib yar, aad si fudud ku guuleysan karto tiirarka weyn oo abaal marin.